रोचक - Dainik Nepal
मंगलबार, ३१ चैत २०७७
बाँदरको फेसबुक अपडेट
तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ बाँदरले पनि फेसबुक चलाउला ? ‘यो फोटो देखेर अचम्ममा नपर्नुहोस् । सम्झनुहोस्– एउटा बाँदर छ । उसको फेसबुक एकाउन्ट छ । र, पौडँदा उसले फेसबुक स्टाटस अपडेट गर्दै छ ।’ यही...
दम्पत्तीलाई जेल भित्रै सेक्स सुविधा
काठमाडौं, १० भदौ । कैदीले जेलभित्रै श्रीमतीसँग शारीरिक सम्पर्क राखन पाउने भएको छ । सरकारले यौनसम्पर्क राख्ने कोठासहित नयाँ कारागार निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कैदी बन्दीको प्रजनन अधिकारका लागि कारागार व्यवस्था...
जोडिएर सुत्ने दम्पत्ति खुशी
तपाईंहरू आफ्नो जोडीसंग सुत्दा बीचमा कति ठाउँ छाड्नुहुन्छ ? दम्पत्ति सुत्दा हुने दूरीका आधारमा अनुसन्धानकर्ताहरूले एक तथ्य पत्ता लगाएका छन् । अध्ययनका अनुसार जोडी सुत्दा दूरी जति कम हुन्छ, उनीहरूबीचको संबन्ध त्यति नै सुमधुर...
आठ बर्षका बालकको १६ किलोको हात ! (फोटो फिचरसहित)
भारतका नयाँ दिल्लीमा एक बालक भेटिएकाछन्, जसको उमेर आठ बर्षमात्रै छ, तर उनको हातको तौल भने १८ किलो छ । ८ बर्षीय यी बालक हुन्, मोहम्मद कलिम । स्कुलका साथीहरु डराउनका साथ साथै सबैले...
यसरी संसार छाडे विश्वकै मोटा व्यक्तिले
विश्वकै मोटा व्यक्तिका रुपमा कहलिएका रिकी नापुतीले संसार छाडेका हुन् । एजेन्सीहरुका अनुसार, आवश्यकताभन्दा बढी खाने बानीकै कारण उनले संसार छाडेका छन् । चार सय किलो तौल भएका ३९ बर्षीय रिकी सात वर्षदेखि ओछ्यानमै...
श्रीमतीले हनिमुनको तस्वीर फेसबुकमा राख्दा…
एजेन्सी श्रीमान श्रीमती हनुमान गएको फोटो फेसबुकमा राखिएको विषयले यतिबेला इटाली तातेको छ । श्रीमानको सहमति विनै श्रीमतीले हनिमुनको फोटो फोटो फेसबुकमा अपलोड गरेका कारण श्रीमानले अदालतमा श्रीमतीविरुद्ध उजुरी दिएका छन् । जुसका कारण...
बेलायती युवराज र युवराज्ञी नाँगै भएपछि… (फोटो फिचरसहित)
एजेन्सी बेलायती राजपरिवारका प्रिन्स विलियम्स र पिन्सेस केट खुलेआम नग्न भएको विषयले यतिबेला तहल्का पिटेको छ । बेलायती राजपरिवारको यस्तो तस्वीर देखेर जोकोही आश्चर्यमा पर्नेछ । कम्तीमा पनि राजपरिवारका सदस्यबाट यसप्रकारको हर्कतको अपेक्षा...
सम्बन्ध विच्छेदको प्रस्ताव राख्दा लिङ्ग चट्
आफूसँग डिभोर्सको प्रस्ताव राखेकोा झोंकमा एक महिलाले श्रीमानको लिंग काटिदिएकी छिन् । चीनका ३० बर्षीय हान झांगले आफ्नो लिङ्ग गुमाउन पुगेका हुन । पत्नीसँग सधै झगडा हुनेगरेपछि उनले सम्बन्धको विच्छेदको प्रस्ताव राखेका थिए ।...
महिलाको तिघ्रा छुँदा कम्युनिष्ट नेता बर्खास्त (भिडियोसहित)
कम्युनिष्ट पार्टीको नियम नै कडा हुन्छ । अनुशासनलाई विशेष ध्यान देखिन्छ, कम्युनिष्ट पार्टीमा । चीनमा पार्टी अनुशासनविपरीत महिलाको तिघ्रा छुँदा चीनको सांघाईमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका एक नेतालाई पार्टीवाट बर्खास्त गरिएको छ । सार्वजनिक गाडीमा...
आलियाले देखाइदिइन् देखाउन नहुने कुरा
बलिउडकी अभिनेत्री आलिया भट्ट मिडियामा कुनै न कुनै कारण चर्चामा रहन्छिन् । उनी आफ्नो स्टाइलिस पहिरनका कारण चर्चामा हुन्छिन् । तर, उनको स्टाइलिसपनले यसपाला धोका दिएको छ। गार्नियर फ्रुट्सको नयाँ उम्पादन सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगेकी...
पैसा तिरेपछि ‘माइली’को स्तनमा हात राख्न पाइने ..
सधै चर्चामा रहिरहने हलिउड स्टार माइली सायरसले पछिल्लो पटक फेरी चर्चामा रहिन । एक टुरको क्रममा उनले आफ्ना फ्यानहरुलाई एक सनसनीपुर्ण अफर दिइन । अफरअनुसार कसैले पनि ९०० डलर तिरपछि माइलीसँग किस गर्न र...
प्रेम टुटेपछि प्रेमिकाको उपहारले प्रहरीसम्म पुर्‍यायो
सोलुखुम्बु, २४ साउन । कसैसँग तपाईंको प्रेम प्रसंग चलेको छ भने माया गर्ने बहानामा पैसाको कारोबार नगर्नुहोला । किनकी तपाईंको माया सफल हुन सकेन भने तपार्इंले दुःख पाउनु हुनेछ । माया सफल नभएर केटाले अर्कैसँग...
नेपालमा नयाँ खालको कोभिड–१९ को भाइरसको पुष्टि, सतर्क हुन अपील
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रेस्लिङ प्रतियोगिता हुँदै, प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने
एमाले सम्वद्ध सम्पर्क मञ्चद्वारा आयोजित फुटसल प्रतियोगितामा आयोजक समूह विजयी
कोरोना संङक्रमण बढेपछि ३० अप्रिलसम्म विद्यालय बन्द
एमाले–कांग्रेसबीच चुनावी सरकारको तयारी
विवेकशील पार्टीले थाल्यो सूचनाको हकसम्बन्धी अभियान
भारतबाट आएका एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
आफूबाट भएका गल्तीलाई सबैले स्वीकार गरौँः योगेश भट्टराई
अदालतले राष्ट्र बैंककी निर्देशक रेग्मीलाई पूर्पक्षको लागि थुनामा पठायो
उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि सरकारले अध्ययन सुरु गरेको छः मन्त्री अर्याल
मकवानपुरमा करेन्ट लागेर दुई जनाको मृत्यु